गगन थापा - कान्तिपुर समाचार
गगन थापा का लेखहरु
किन विद्युतीय सवारी साधन ?
गगन थापा, कार्तिक १५, २०७४
विगत केही वर्षदेखि काठमाडौंका सडक लगायतका संरचनाको धमाधम निर्माण र विस्तार भइरहँदा सम्पूर्ण उपत्यका नै धुलाम्य बनेको छ । केही समयमा सडक बन्ला, धुलोबाट मुक्त पनि भइएला ।
वाम गठबन्धन- व्यर्थको अलमल
गगन थापा, आश्विन २१, २०७४
विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मूलतत्त्वलाई ग्रहण गर्नुका साथै नेपाली समाजको अपेक्षाअनुरूप केही मौलिक विशेषता अँगालेको ऐतिहासिक संविधान निर्माणसँगै सिद्धान्तको अन्तहीन झमेलामा फसेको मुलुकले अन्तत: शान्ति, समृद्धि, न्याय र समताको यात्रामा अगाडि बढ्ने वैधानिक बाटो भेट्टाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा किन ?
गगन थापा, आश्विन २, २०७४
प्रत्येक दिन थुप्रै नेपाली उपचार खर्च नपाएर छट्पटाइरहेका वा घरखेत बन्धकी राख्न बाध्य भइरहेका छन् । सबै सम्पत्ति सकेर उपचार गरे पनि बाँकी जीवन कष्टमा बाँच्न विवश धेरै कथाव्यथा छन्, हाम्रो समाजमा । संविधानत: ती सबैको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
काठमाडौंमा दुख्ने म्यानमारको घाउ [फोटोफिचर]
गगन थापा, भाद्र २४, २०७४
म्यानमारमा रोहिंगा मुस्लिम र सरकारी सेनाबीचको तनाव झनै चर्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सेनाको दमनका कारण ४ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
नगरी काम पुग्दैन खान...
गगन थापा, वैशाख १८, २०७४
बढ्दो सहरीकरण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि इँटाको माग ह्वात्तै बढेको छ । तर मेसिनबाटै इँटा बनाउने भट्टी थोरै छन् । अधिकांश भट्टामा कामदारहरू हातले नै इँटा बनाउँछन् ।
कति छन् यो मुटुमा घाउ...
गगन थापा, माघ २९, २०७३
आफ्नो श्रीमान् कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या भएको १५ वर्षपछि पनि तक्मा केसी विक्षिप्त छिन् । माओवादी समर्थित साप्ताहिक पत्रिका सम्पादक तथा पत्रकार इच्छुकलाई २०५९, जेठ ६ गते सुरक्षाकर्मीहरूले यातना दिएर हत्या गरेका थिए ।